ट्रान्जिस्टर: यो पोडकास्टिङ प्लेटफर्मको साथ तपाईंको व्यापार पोडकास्टहरू होस्ट र वितरण गर्नुहोस् | Martech Zone
मेरो क्लाइन्टहरू मध्ये एकले पहिले नै उनीहरूको साइट र YouTube मार्फत भिडियोको लाभ उठाउनमा उत्कृष्ट काम गर्दछ। त्यो सफलताको साथ, तिनीहरू पाहुनाहरू, ग्राहकहरू, र आन्तरिक रूपमा तिनीहरूका उत्पादनहरूका फाइदाहरू वर्णन गर्न मद्दतको लागि लामो, थप गहन अन्तर्वार्ताहरू गर्न खोजिरहेका छन्। पोडकास्टिङ तपाईंको रणनीति विकास गर्न आउँदा यो एकदम फरक जनावर हो... र यसलाई होस्टिंग पनि अद्वितीय छ। म तिनीहरूको रणनीति विकास गर्दैछु, म एक सिंहावलोकन प्रदान गर्दैछु:
अडियो - पोडकास्टमा चलाउन सकिने intros, outros, र कल-टु-एक्शनको विकास।
दृश्यहरू - तपाईंको पोडकास्ट छवि र एपिसोड छविहरूको विकास।
सामग्री - तिनीहरूको उत्पादनसँग सम्बन्धित शीर्ष प्रश्नहरू र सरोकारहरूको लाभ उठाउनका लागि विचारहरूको साथ सामग्री क्यालेन्डरको विकास। यसमा अतिथि सिफारिसहरू र साझेदारी गर्न तेस्रो-पक्ष अनुसन्धान समावेश छ।
सेवा प्रदायक - पोडकास्ट सर्भरहरू मिडिया स्ट्रिमिङको लागि अनुकूलित छन्, त्यसैले प्रयोग गर्न सजिलो, बलियो, भरपर्दो, पोडकास्ट होस्टिङ प्लेटफर्म तपाईको सफलताको लागि महत्वपूर्ण छ। केहीले उत्कृष्ट खेलाडीहरू पनि प्रस्ताव गर्छन्।
सिन्डिकेशन - तपाईंको होस्टसँग सबै आवश्यक फिड अनुकूलन क्षमताहरू हुनुपर्दछ सामग्री वितरण गर्न पोडकास्ट सिन्डिकेट गर्नुहोस् पोडकास्ट डाइरेक्टरीहरू र नेटिभ मोबाइल प्लेटफर्महरूमा।
विश्लेषण - पोडकास्ट एनालिटिक्सले तपाइँका सबै वितरित साइटहरूबाट तपाइँको कुल अनुरोधहरू र सुन्नेहरू देखाउनको लागि प्लेटफर्ममा फिर्ता अनुरोध गर्दछ।
यी सुविधाहरू ठ्याक्कै किन तपाईं आफ्नो पोडकास्ट व्यवस्थापन गर्न आफ्नो औसत वेबसाइट होस्टिङ सेवा प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न। उत्कृष्ट पोडकास्ट होस्टिङ प्लेटफर्म पाउनु महत्त्वपूर्ण छ... र हामी मनपर्छौं ट्रांजस्टर!
ट्रान्जिस्टर पोडकास्ट होस्टिंग
ट्रांजस्टर पोडकास्ट होस्टिङ, सिन्डिकेशन, र विश्वभरका हजारौं संस्थाहरू, ब्रान्डहरू र क्रिएटिभहरूका लागि विश्लेषणहरू प्रदान गर्दछ। प्लेटफर्म पेशेवर पोडकास्टरहरू द्वारा सुरु गरिएको थियो जसले एक व्यापक प्लेटफर्म निर्माण गर्ने अवसर देख्यो। यहाँ प्लेटफर्मको एक सिंहावलोकन छ:
प्लेटफर्मका मुख्य विशेषताहरू जुन हामीलाई विश्वास छ कि यसलाई एक असाधारण बनाउँछ पोडकास्ट होस्टिङ प्लेटफर्म हो:
असीमित पोडकास्टहरू - धेरै पोडकास्ट होस्टहरूले प्रति शो शुल्क लिन्छन्... ट्रान्जिस्टरको साथ तपाईंले तिनीहरूको कुनै पनि मूल्य निर्धारण विकल्पहरूमा मनपर्ने धेरै कार्यक्रमहरू हुन सक्नुहुन्छ।
निजी पोडकास्टहरू - व्यवसायहरू प्राय: निजी पोडकास्टहरू साझेदारी गर्न चाहन्छन् र ट्रान्जिस्टरले तपाईंलाई ती सदस्यहरू व्यवस्थापन गर्न दिन्छ।
बिल्ट-इन वेबसाइट - तपाईंको पोडकास्टको लागि अर्को साइट निर्माण गर्न आवश्यक पर्दैन, तिनीहरूको प्लेटफर्ममा सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली समावेश छ।
पोडकास्ट प्लेयर - सजिलैसँग अन्य साइटहरूमा एउटा सुन्दर पोडकास्ट प्लेयर इम्बेड गर्नुहोस्... र तिनीहरूले तपाइँको ट्विटर पोस्टहरूमा प्लेयरलाई इम्बेड गर्न ट्विटरको क्षमतालाई समर्थन गर्दछ।
गतिशील विज्ञापन प्रविष्टि - ती महत्त्वपूर्ण कल-टु-एक्शन वा प्रायोजकहरू देखाउनका लागि।
थप टोली सदस्यहरू - तपाइँको शो प्रकाशित गर्ने टोलीसँग काम छ? तिनीहरूलाई तपाईंको खातामा थप प्रयोगकर्ताहरूको रूपमा थप्नुहोस्।
सिन्डिकेशन उपकरणहरू - तपाइँको पोडकास्टलाई तिनीहरूको एम्बेडेड उपकरणहरूसँग अनुकूलन र सिन्डिकेट गर्नुहोस्। तिनीहरूले Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict, Breaker, Player FM मा १-क्लिक सबमिशन पनि प्रस्ताव गर्छन्।
पोडकास्ट खोज इन्जिनहरू - नोटहरू र पोडकास्ट अनुक्रमणिका सुन्न 1-क्लिक सबमसन।
रिपोर्ट - तपाइँका सबै कार्यक्रमहरूको लागि सरल, समग्र रिपोर्टिङ, एपिसोडहरू जसले प्रत्येक सुन्न समावेश गर्दछ।
ट्रांजस्टर तपाईंका सबै अन्य उपकरणहरू एक सुन्दर प्रयोगकर्ता इन्टरफेसमा प्रदान गरिएको छ जुन प्रयोग गर्न र तपाईंको पोडकास्टबाट सुरु गर्न सजिलो छ।
खुलासा: म एक सम्बद्ध छु ट्रांजस्टर र म यस लेखमा मेरो सम्बद्ध लिङ्क प्रयोग गर्दैछु।
टैग: स्याऊApple Podcastsब्रेकरगूगलGoogle पोडकास्टहरूनोटहरू सुन्नुहोस्प्लेयर एफएमपोडकास्टपोडकास्ट लतपोडकास्ट वितरणपोडकास्ट होस्टिंगपोडकास्ट सूचकांकपोडकास्ट रिपोर्टिङपोडकास्ट खोज इन्जिनपोडकास्ट सिन्डिकेशनSpotifyspotify पोडकास्टपोडकास्ट सूचकांकट्रांजिस्टर